Baarlamaanka Soomaliya oo maanta kulan adag leh | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Baarlamaanka Soomaliya oo maanta kulan adag leh
Baarlamaanka Soomaliya oo maanta kulan adag leh
Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kulan yeelanaya ayaa ka doodi doona mid kamid ah xeerarka doorashooyinka oo dhawaan soo gudbiyeen Guddiga Wadajirka ee dhameystirka xeerarka doorashooyinka.
Kulanka Baarlamaanka ayaa maanta xildhibaanada loogu qeybin doonaa xeerka qoondada Haweenka si ay dood adag uga yeeshaan kadibna u meel mariyaan ama meesha looga saaro xeerkan.
Xeerka qoondada haweenka Baarlamaanka federaalka ayaa dhigaya in kuraasta haweenka loo qoondeeyay kaliya ay ku tartamaan Haween si loo ilaaliyo qoondada ay haweenka ka helayaan Baarlamaanka oo ah %30.
Guddigii Wadajirka ahaa ee dhameytsirka xeerarka doorashooyinka ayaa soo diyaariyay afar xeer oo doorashooyinka, waxaana xildhibaanada xeerarkaasi uga doodi doonaan mid mid iyagoona kadib ansixin doona ama iska diidi doona.
Previous articleSweden Dadka ku dhashay dibada ayaa ugu badan dhimashada Corono
Next articleDegmooyinka Gobolka Banaadir oo bilaabay tar tan Dhanka Dalxiiska ah
Taliyihii ilaalada Ra’iisul Wasaare Kheyre oo dadka soo xasuusiyay hab dhaqan...
Fanaaniinta Soomalida oo ku kala qeybsamay heysta Waayaha Cusub...